Ahlusuna waljamaaca "Majiraan Xubno nagatirsan oo ka qeyb galay Shirka Muqdisho" – SBC
Ahlusuna waljamaaca "Majiraan Xubno nagatirsan oo ka qeyb galay Shirka Muqdisho"
Maamulka Ahlusuna waljameeca ee gobolada dhexe ayaa sheegay in aysan jirin wax xubno ah oo ugaga qeyb galay Shirka wada tashiga ah ee ka soconaya magaalada Muqdisho xarunta Dalka kaas oo la isugu yeeshay maamulada ka jira deegaanada dalka Soomaaliya.
Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa maalin nimadii shalay furtay shirka wada tashiga ah, iyadoo shirkaasi lagu sheegay in ay goob joog ka yihiin xubno ka kala socda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo weliba Ahlusuna waljameeca.
Sh Cumar Sh C/qaadir Gudoomiyaha Gudiga talada Ahlusuna waljameeca ayaa SBC u Sheegay in aanay jirin xubno ka socda Ahlusuna waljameeca oo ugaga qeyn galay shirkaasi galay maalintii labaad ee Muqdisho ka soconaya .
Sh Maxamed Yuusuf Xeefoow gudoomiyaha gudiga Fulinta Ahlusuna waljameeca ayaa isagana sheegay in aysan qasan aheyn in Ahlusuna ay ka qeyb gasho shirkaasi balse hadii ay ka soo baxaan wax dan u ah Umada Soomaaliyeed aysan is hortaagi doonin qaadana doonaan wixii la isku afgarto.
Geeswalba ha jirtee hadalada Masuuliyiintan ka tirsan ahlusuna waljameeca ayaa ku soo aadaya xili uu galay maalintii labaad Shirka wadatashiga soomaaliya ee ka socda magaalada Muqdisho iyo Madaxweynaha DKMG ah oo shalay hadal uu ku furayay ku sheegay in Ahlusuna ay shirka ku sugantahay.